China Nhazi Nri PSA Nitrogen Generator Nrụpụta na Factory | Binuo
Usoro Usoro nke teknụzụ PSA
Ngwa nke Osisi Nitrogen Generator PSA maka nhazi nri
Nkwakọ nri jupụtara na Nitrogen
Ngwunye nitrogen jupụtara na ya nwere ike ichekwa ụdị nri dị n'ime ka ọ ghara ịzọpịa nri ndị na-asọ oyi. N'ihi enweghị ahaghị nhata nke nrụgide dị n'ime na nke mpụga, nkwakọ ngwaahịa jupụtara na nitrogen nwekwara ike zere njikọ nrụgide nke nri ekpokọtara ma mee ka ọdịdị ahụ sie ike. Mgbe ihe nkwakọ ngwaahịa mebiri site na mpịakọta nke elu, nkwakọ ngwaahịa jupụtara na nitrogen nwere ike ibelata ihe ize ndụ nke mmebi nri. Nri nke nwere ọdịdị na-adịghị mma nwere ike idowe ịma mma nke ngwugwu ngwugwu.
Antiseptik & Nchekwa
Dị ka mmeghachi omume oxidation na nsonye oxygen, ọ na-akwalite mmeputakwa nke microorganisms na nje bacteria na-eduga n'eriri nri na mmebi. Nitrogen bụ gas na-adịghị agwụ agwụ, nke nwere ike ịkụnye ma gbochie mmepụta nke nje bacteria na nri. Ebumnuche nke iji nitrogen bụ ikpochapụ oxygen ma mee ka oxidation na iku ume nke nri kwụsịlata. Karịsịa, solubility nke nitrogen dị ntakịrị na mmiri na mmanụ, na ntinye nke nitrogen site na nri dị ntakịrị. Ya mere, enwere ike iji ya dị ka gas ka mma maka nri antiseptik na nchekwa.
Nchekwa ihe akaebe ụmụ ahụhụ
Nitrogen ndochi nwere ike igbochi mmebi nke pests maka ọka, mkpụrụ, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na otú mba. Ka ọ dị ugbu a, nchekwa na-ejuputa nitrogen nwere ike belata metabolism dị ka ịbanye n'ụba na igbochi chara chara, nke mere na enwere ike ịchekwa ya ogologo oge.
Akara mmanya (ịkwa iko) na nchekwa
Nitrogen nwere ike wepu oxygen ma gbochie oxidation, nrụrụ aka na ngbanwe nke ihe ọṅụṅụ carbonated na mmanụ oriri maka biya, mmanya, mmanya mkpụrụ osisi, mmanụ oriri, nwere ike ịpị, ịfụ karama na capping. Ọ bụrụ na-eji ihe nkwụsị karama cork, ọ nwere ike igbochi mildew nke cork dị na karama ahụ.
Nitrogen na-afụ ụfụ nwere ike ịbawanye ụda na ike mgbasawanye iji mee ka ndụ dịkwuo ogologo maka mmanụ nri, Mayonezi, margarine barreled ma ọ bụ ngwaahịa mmanụ ahụekere.
Ọnụego Nitrogen 3 ~ 3000Nm3/h
Nitrogen dị ọcha 95 ~ 99.999%
Nrụgide nitrogen 0.1 ~ 0.8 MPa(Enwere ike idozi)
Igirigi Point -60℃ ~ -45℃
Ihe ngosi ihe nlere anya nkewa Nitrogen Generator nke membrane.
Nkọwapụta Mpụta (Nm<span)>³/h) Effective Gas Consumption (Nm<span)>³/min)
Dị ka ihe ndị ahịa chọrọ (nitrogen eruba / ịdị ọcha / nrụgide, gburugburu ebe obibi, isi ojiji na ihe pụrụ iche chọrọ), Binuo Mechanics ga-ahazi maka ngwaahịa na-abụghị ọkọlọtọ.
Nke gara aga: Ngwongwo mmiri oyi na-atụ oyi
Osote: Laser Cutting PSA Nitrogen Generator Plant
Psa na osisi nitrogen
Psa Nitrogen Gas osisi
Ọnụ ahịa Nitrogen Generator Psa
Igwe Nitrogen Psa
Onye na-emepụta ihe ọkụkụ Nitrogen Psa
Ọnụ ahịa Oxygen Generator Psa
Teknụzụ Psa Maka Ọgbọ Nitrogen
Ụlọ elu Psa dị na Nitrogen Plant
Psa Ụdị Nitrogen Generator
Ọgwụ ọgwụ bayoloji PSA Nitrogen Generati...
Psa Nitrogen osisi, Holtec Nitrogen Generator, Psa Nitrogen, Atlas Copco Ngp, Ọgbọ ike hydrogen, Hydrogen na Oxygen Generator,